Maxay Isbedelada Yaryar ee Dhiirrigelinta Suuqgeynta Ganacsiga ee CPG ay u horseedi karaan Natiijooyin Waaweyn | Martech Zone
Jimco, Abriil 21, 2017 Axad, Abriil 23, 2017 Terry Ziegler
Qeybta Macaamiisha Macaamiilku waa meel ay maalgashiyo waaweyn iyo isbeddello badan ay inta badan ka dhashaan isbeddello waaweyn oo ku yimaada magaca waxtarka iyo faa'iidada. Shirkadaha waaweyn sida Unilever, Coca-Cola, iyo Nestle ayaa dhawaan ku dhawaaqay dib-u-habeyn iyo dib-u-istiraatiijiyad si loo kobciyo koritaanka iyo kharashka keydka, halka kuwa soo saara alaabada yar yar ee macmacaanka ah lagu bogaadinayo inay yihiin agile, shilal xisbi cusub oo la kulmaya guul muhiim ah iyo soo jiidashada. Natiijo ahaan, maalgashiga istiraatiijiyadda maareynta dakhliga ee saameyn ku yeelan kara koritaanka hoose ayaa si mudnaan leh loo kala hormariyaa.
Ma jirto meel lagu baadho oo ka weyn suuqgeynta ganacsiga ee shirkadaha alaabada macaamiisha ay maalgashadaan in ka badan 20 boqolkiiba dakhligooda kaliya si loo arko in ka badan boqolkiiba 59 ee dallacsiintu waxtar ma leh sida uu sheegay Nielsen. Intaas waxaa sii dheer, ka Machadka Dhiirrigelinta Dhiirrigelinta qiyaaso:
Ku qanacsanaanta awooda maaraynta dallacsiinta ganacsiga iyo fulinta tafaariiqda ayaa hoos u dhacday oo hadda waxay mareysaa 14% iyo 19%, siday u kala horreeyaan 2016-17 TPx iyo Warbixinta Fulinta Tafaariiqda.
Natiijooyinka noocan oo kale ah, mid ayaa laga yaabaa inuu ka shakiyo in suuqgeynta ganacsigu u nugul tahay isbeddelka soo socda ee shirkadaha CPG, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in hagaajinta waxqabadka kor u qaadista ganacsiga aysan u baahnayn geeddi-socodka taariikhi ah, dadka iyo dib-u-habeynta alaabada ee ay u baahan yihiin tallaabooyinka kale ee hagaajinta qiimaha. Taabadalkeed, wadada loo maro kor u qaadista kor u qaadista ganacsiga waxaa lagu goglay isbadalo yar yar oo saameyn weyn oo waara ku yeelan kara.
Ka go'an in ka fiican
Adduunyada ay shirkaduhu ku maalgelinayaan malaayiin doolar dallacsiin aan waxtar lahayn, xitaa in yar oo horumar ah ayaa wax weyn ku dari doonta khadka hoose. Nasiib darrose, ururo badan ayaa qorey dalacsiin ka baxsan ganacsiga oo ah aag kharashkiisa lagama maarmaan u yahay halkii ay iska weydiin lahaayeen hal su'aal oo fudud -
Kawaran haddii aan hal isbeddel ku sameeyo hal dallacsiin hal tafaariiqle ah?
Iyada oo gacan laga helayo xalka kobcinta ganacsiga oo dhameystiran, jawaabta ayaa daqiiqado u jirta KPI-yada la saadaalin karo oo ay ku jiraan faa'iidada, mugga, dakhliga iyo ROI ee soo saaraha iyo tafaariiqleyda. Tusaale ahaan, haddii sheyga A uu ku shaqeynayay kor u qaadista 2 $ 5, maxay saameyn ku yeelanaysaa haddii dhiirrigelintan lagu socodsiin lahaa 2 $ 6? Awoodda lagu dabakhi karo saadaalin Analytics in la abuuro maktabad ka mid ah astaamahan "maxaa-yeel" oo leh natiijooyin tiradooda la tirtiray waxay tirtiraysaa mala awaalkii ka dambeeyay qorshaynta dalacsiinta taas beddelkeedana waxaa looga faa'iideysanayaa aragti istiraatiijiyadeed si loo xisaabiyo natiijada KA HELI.
Ha u qaadan “Ma aqaano” Jawaab
Xayeysiintan ma socodsiisay? Dallacsiintani ma wax ku ool ahayd? Qorshahan macaamilku ma la kulmi doonaa miisaaniyad?
Kuwani waa dhowr su'aalood oo shirkadaha alaabada macaamiisha ah ay ku dhibtoonayaan inay u helaan jawaabahooda sababo la xiriira xog aan dhammaystirnayn, aan sax ahayn ama aan la fahmi karin. Si kastaba ha noqotee, waqtigii munaasibka ahaa ee la isku halleyn lahaa Analytics waa aasaaska go'aan qaadashada xogta ku saleysan ee hagta istiraatiijiyadda kor u qaadista ganacsiga.
Si taa loo gaadho, ururadu waa inay tirtiraan waraaqaha gacanta ee qaladka u nugul sida qalab ururinta iyo falanqaynta xogta. Taa baddalkeeda, ururadu waxay u baahan yihiin inay eegaan xallinta dhiirrigelinta ganacsiga ee keena xarun sirdoon oo bixisa hal nooc oo run ah markay tahay aragtida iyo xisaabinta kor u qaadista ganacsiga ROI. Tan, shirkaduhu waxay dib-u-xoojin doonaan dareenkooda ku qaatay raadinta macluumaadka si firfircoon u falanqeynaya waxqabadka iyo isbeddellada lagu hagaajinayo natiijooyinka. Maahmaahda ah, ma hagaajin kartid waxaadan arki karin, run ma aha oo kaliya marka ay timaado dallacsiinta ganacsiga, laakiin sidoo kale waa qaali.
Xusuusnow, Waa Shakhsi
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan hagaajinta suuq geynta ganacsiga ayaa ah la dagaalanka waligeen sidan ayaan ku qabannay maskaxda. Xitaa isbeddelada ugu yar ee loo maro geeddi-socodka magaca hagaajinta waxay leeyihiin awood ay ku adkaadaan oo xitaa ku hanjabaan marka aysan si cad ula jaan qaadin ujeeddooyinka abaabul iyo shaqsi ahaanba Gudaha Tilmaamaha Suuqa ee Maareynta Dhiirrigelinta Ganacsiga iyo Ku Hormarinta Warshadaha Alaabta Macaamiisha, Falanqeeyayaasha Gartner Ellen Eichorn iyo Stephen E. Smith waxay ku talinayaan:
U diyaargarow maaraynta isbeddelka si aad ugu baahan tahay dadaal muuqda. Ku dhiirrigeli dabeecadaha aad rabto inaad fuliso adoo dib u dejinaya dhiirrigelinta iyo geeddi-socodka, oo noqon kara qaybta ugu weyn ee hirgelintaada.
Dhinac marka laga eego, waxay u muuqan kartaa mid caqli-gal ah in la soo jeediyo in hirgelinta xallinta dhiirrigelinta dhiirrigelinta ganacsigu ay tahay isbeddel yar. Si kastaba ha noqotee, si ka duwan maal-gashiga kale ee tikniyoolajiyadda, hirgelinta iyo aragtida faa'iidooyinka laga helo a Dhiirrigelinta Ganacsiga (TPO) xalku waa inuu dhacaa 8-12 toddobaad gudahood. Intaa waxaa sii dheer, dabiiciyan, xalka TPO wuxuu kaliya qiimo u leeyahay sida awooda ururku u leeyahay cabir ahaan iyo joogtaynta saamayntiisa hoose si markaa dib loogu dhigo maalgashiga marar badan.
Farqiga dhabta ah marka ay timaado hagaajinta dallacsiinta ganacsiga, ee ka soocda dadaallada kale ee shirkadaha, ayaa ah inaysan ku imaanayn wax cusub, laakiin ay tahay maalgelin wanaagsan. Dallacsiinta ka wanaagsan, tababaro wanaagsan, natiijooyin wanaagsan.
Tags: Coca-ColaCPGDhiirrigelinta Suuqgeynta Ganacsiga ee CPGNestlénielsenMachadka Dhiirrigelinta Dhiirrigelintaxalka tpoDhiirrigelinta Maareynta GanacsigaDhiirrigalinta Suuqgeynta GanacsigaDhiirrigelinta GanacsigaUnilever
Terry Ziegler waa agaasime guud iyo aasaasaha Xalka T-Pro. In ka badan 30 sano oo khibrad maareyn ah oo alaabooyinka la soo baakadeeyay ah (CPG) khibrad maamul u leh meelaha suuqgeynta ganacsiga, suuqgeynta macaamiisha, maareynta qeybta, iibinta iyo maaliyadda ee doorka hoggaamineed iyo maareynta ee RJR / Nabisco, Borden Foods, Beeraleyda Caanaha ee Mareykanka, Kooxda Iskuxirka iyo Teknolojiyada AFS; Terry wuxuu isku daraa codsi cusub iyo hogaamin wax ku ool ah.